Gịnị Bụ The Best nri Rie On Ụgbọ oloko | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Gịnị Bụ The Best nri Rie On Ụgbọ oloko
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 21/02/2021)
Best nri iri na ụgbọ oloko na-na n'oge nnọọ na-atọ ụtọ. N'ihi na ọtụtụ ụgbọ oloko na-enye 5-kpakpando ulo na klas mbụ nri. Nke a na-agụnye nri mere ererimbot ama chefs. Eleghị anya ị na-eji na-agụ banyere ịtụnanya nri n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ mara mma ị pụrụ ịhụ na a ụgbọ okporo ígwè na njem. Ya mere ọ pụrụ iju gị anya na nri i nwere ike iri na a ụgbọ okporo ígwè dokwara enwekwa.
Ebe a na-n'elu 7 kacha mma nri na-eri na ụgbọ oloko i nwere ike iri
Na-apụ apụ ọtụtụ ebe na Britain si London, a ụgbọ okporo ígwè na-enye a ezi iri ahụmahụ. Na-eri nri na-agụnye nri kere celebrity chefs Tom Kerridge na Anton Mosimann ndị na-ma ama maka ha J.Randall UK iri klọb.
Ikekwe, ihe kasị mma na sinik njem na mbara ala. Nke a okomoko 1920 style ụgbọ okporo na aga site na Peruvian obodo awade enwekwa nri. The anọ na-N'ezie Andean n'ike mmụọ nsọ menu agụnye utọ ka crispy ham na eucalyptus na beef na grape na tartar.
3: Blue Train (South Africa) – Africa ji mma nri na-eri na ụgbọ oloko
Nke a ụgbọ okporo ígwè na-enye 5 Star Cuisine maara dị ka “cordon Blue,” nke na-agụnye iche iche efere mere na obodo Efrata. Ụfọdụ ndị tọrọ ụtọ nri pụrụ iche ka ihe atụ enyí nnụnụ, South African oysters, na venison.
4: Great Southern Okporo ígwè (Australia)
N'otu aka ahụ na Blue Train, ị pụrụ ịnụ ụtọ ọhụrụ na mpaghara ndụ nri a Australian Southern Okporo ígwè. The chefs, obodo suppliers, na ndị ọrụ ugbo na-ezukọta ịmepụta otu Australian nri na-ewetara ndị kacha mma nke ma oriri na mmanya. The ụgbọ okporo ígwè na-atụmatụ ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-enye elu efere. Dị ka ihe atụ kangaruu, saltbush na anụ rosella ifuru, barramundi na Margaret River chiiz.
5: Napa Valley Wine Train (California) – America kacha mma nri na-eri na ụgbọ oloko
N'ezie, a ụgbọ okporo ígwè na ụdị aha ga-eje ozi magburu onwe wine ọgụgụ buru ibu nakwa na ọ na-eje ozi oké oriri. The 3 esi n'ụgbọ enye njem na otutu N'ezie Gọọmet nri na a ụgbọ okporo ígwè na e mere na wuru na 1917.
Ke akpa itie, okwu Orient Express aga aka na-na-aka na ezi erimeri. Nke a ụwa na-ama ụgbọ okporo ígwè njem site Europe na-enye nri mere na ọhụrụ na Efrata anakọtara na ụgbọ oloko akwụsị. The siri nri na osisi Yannick Alleno ka ịmepụtagharịa klas nke a gara aga oge na efere dị ka Royal peas, Bresse chicken fricassee na mushrooms na ṅara n'ọkụ osikapa.
7: Royal Scotsman (Scotland) – Europe ji mma nri na-eri na ụgbọ oloko
Ikpeazụ na anyị shortlist nke ezi erimeri ụgbọ oloko, a ụgbọ okporo ígwè atụmatụ abụọ akụkọ ihe mere eme erimeri ụgbọala. Ị pụrụ ịnụ ụtọ omenala oriri dị ka kippers ma ọ bụ Scottish nri ụtụtụ. Biko mara na nri abalị na a ụgbọ okporo ígwè dị ezigbo iwu, wee jide n'aka na gentlemen eyi Jaketị na nwaanyị uwe kwesịrị ekwesị maka nri.
Book tiketi maka ụgbọ oloko na-atọ ụtọ nri
On ugbu a na ị na-eme na-agụ, n'ihi ya, ihe i chere nke kasị mma nri na-eri na ụgbọ oloko. Na Save A Train anyị ekpuchi ụgbọ oloko gafee Europe na-enye ezigbo ihe oriri maka njem. Ntinye akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi dịtụbeghị mfe. akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè njem na anyị na saịtị ma ugbu a ma na-erughị 3 nkeji i nwere ike ịchọta zuru okè ụgbọ okporo ígwè tiketi maka njem gị. Buy ụgbọ oloko Tickets na otutu ụzọ na mgbakwunye na isi E Si Nweta Kaadị.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-meals-trains%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#nri ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel
I love travel but you didn't expect me not to say that, I am a free spirit who travel in Europe and work in the train industry, hope you like what I write - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m